Ratelọ ọrụ ịde blọgụ vidiyo 1: Douglas Karr
Rocky Walls na Zach Downs si Kpakpando iri na abụọ Media gbadata na DK New Media office and shot video of Chantelle and I for a couple vidiyo anyị chọrọ ka na Atụmatụ ịde blọgụ ụlọ ọrụ saịtị.
Nke a bụ oge dị egwu. Onweghi nke ederede ederede ma obu megharia. Anyị nyochaa ihe mgbaru ọsọ anyị tupu oge ịse:
E nwere vidiyo abụọ. Chantelle lekwasịrị anya na 2 nke ihe mgbaru ọsọ na vidiyo ya ma m lekwasịrị anya na 2 nke ihe mgbaru ọsọ m. Anyị ga-egosi vidiyo Chantelle n'ehihie a ma ọ bụ ị nwere ike ịlele ya na Atụmatụ ịde blọgụ ụlọ ọrụ. Rocky gbara ajụjụ ọnụ (ị ga-achọpụta na ọ naghị egosi na vidiyo!) Wee nyeere anyị aka ịzaghachi nzaghachi site na mmadụ ole na ole na-ewe nke ọ bụla. Nsonaazụ njedebe, yana ụfọdụ ederede dị egwu, bụ ọkaibe ị hụrụ n'elu!
Tags: 12 kpakpando mgbasa oziụlọ ọrụ ịde blọgụụlọ ọrụ ịde blọgụ maka dummiesdouglas karrdummieswiley